Waamicha Kora Uummataa Gurmuu Deeggarsa KFO irraa -
Waamicha Kora Uummataa Gurmuu Deeggarsa KFO irraa
bilisummaa March 29, 2017	Leave a comment
Akkauma beekkamu Sadaasa 12, 2015 irraa kaasee sochiin saba Oromoo cimee mootummaa abbaa-irree jalbiiffachiisee jilbaan lafarraa shoqoqsaa jira. KFOn Sochii Duula filannoorraa kaasee mormii masterpilaanii fi lafaa dabalatee mata-duree ta’ee socho’uunsaa ni yaadatama.
Kanumaan wolqabatee hoggantoota isaa dabalatee woreegama guddaa kaffala jira.
“Hegereen Qabsoo Oromoo maal ta’a?” Fi “Tarkaaffiin itti aanu maal ta’a?”
“Maal gochuu qabna? Maaltu nurraa eeggama?”
jedhuu fi Haala Qabatamaa biyya keesssaa irratti mariin ni taasifama. Sochiin KFO biyyaa fi GD -KFO Idil Addunyaa maalirra akka jirus ibsi ni kennama.
Hundi keessanuu akka nuuf argamtanu kabajaan waamamtaniirtu.
Horaa Bulaa! Qabsoon itti fufa!
Previous Yaadachiisa obboleeyyan keenya kan Sa’uudii keessa jirtaan hundaaf!!
Next Professor Asefa Jaalataa is accusing others ( his former peers) for very same thing he is doing himself instead of re-evaluating his own political propaganda campaign action..